Dhaloonni barate yoomiyyuu injifataadha- obbo Shimallis – Fana Broadcasting Corporate
Dhaloonni barate yoomiyyuu injifataadha- obbo Shimallis
Finfinnee, Fulbaana 4,2012(FBC)- Ergaa itti aanaan preezdaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaan barattootaf dabarsan.
Ibsi guutun kinooti;
Dhaloonni Barate Yoomiyyu Injifataadha!!
Barattoonni gulantaa barnootaa gara garaarratti argamtan baga jalqabbii guyyaa Barnootaa ifa jireenya heegaree keessanii itti mullifattaniin isin gahe- Obbo Shimallis Abdiisaa I/A/P/Mootummaa Naannoo Oromiyaa.
Barnoonni guddina hawaasa tokkoo keessatti murteessaadha.Qaroomina saayinsii fi tekinooloojii yeroo ammatti adunyaan irra ga’eef barnoonni bu’ura akka ta’e beekamaadha.
Injifannoo ummanni Oromoo yeroo ammaa argate duubas icciitiin jiru barnoota ta’uun kan wal nama gaafachiisu miti.
Keessattuu Qeerroo fi Qarreewwan keenya Naamumsa cimaan, qindoominaa fi Tarsiimoon masakkamuun adda isaanii waraanaaf kennanii waan haaraa addunyaa barsiisan, kan yaadannuun barnootaan yoo cimneedha.
Dhaloonni injifataan , keessattuu qeerroo fi qarreen amma jiru kun waan hin danda’amu jedhamu akka danda’amu garsiisee jijjiirama haarsaan fide, barnoonni kan aarsaa isaanii itti yaadannee, injifannoo siidaa bara baraan yaadatamu goonee itti dhaabbannuudha, Injifannoo Wareegama qeerroo fi qarree ceesisuu kan dandeenyu ammas barnootatti yoo cime ta’uun ifadha.
Akkuma Jeneraal Taaddasaa Birruu Oromoon bilisoomuuf barachuu akka qabu dhaaman dhaloonni barate dabalaa akka deemeen qabsoon ummanni Oromoo biyyattii keessatti taasisaa ture yeroo gara yerootti jabaachaa deemuun dhaloota amma jiru kanaan injifannoof qaqqabuun isaa hagam barnoonni ga’ee olaanaa akka qabu ifatti mul’isa.
Dhaloonni injifataan , keessattuu qeerroo fi qarreen amma jiru kun waan hin danda’amu jedhamu akka danda’amu garsiisee jijjiirama haarsaan fide ceesisuu kan danda’u ammas barnootatti yoo cime ta’uun ifadha.
Oromoodhaaf barnoonni mataa isaatti qabsoodha, injifachuudha, beekkomsaan wal utubanii waan hunda irra aanuudha, Barnoonni himna, tooftaa injifannoo qabsooti, Barnoonni tokkummaa wal hubannaa ittichuun irree waliif tahanii qormaata kamuu injifannoon irra cehuudha.
Injifannoo caaluu fi dorgomaa ta’uuf baranna, taateen xixiqqoon kaayyoo keenyarraa of boodaa nu hin deebisu, baruumsa keenyarraahiis nu hin gufachiisu, Imaanaa Qeerroo milkeessuddha.
Nageenya Manneen baruumsaa keenya eeggannee, dhaloota beekkomsaaf cichee addunyaa faana dorgomu tahuuf yaa qophoofnu, kaayyoo keenyarraa yoo laafnee fi gufanne ni cabna, imaanaas ni harcaafna kun nuuf fafa, injifannoon beekkomsaan ittti fufa.
Yeroo keenya guutuu baruumsaaf yaa oolchinuu, wal qo’achiifnee wal deeggarree baruumsaan yaa cimnuu, injifachuu fi moo’achuu yaadaa yaa aadeeffannu, barannu yaa injifannuu.
Barsiiftoonni keenya qaroo sabaa waan taataniif kabajaa fi ulfinaatu isiniif mala
Barri haaraan bara Imala Dhaloota ijaaruu keessatti rakkoo kamuu otoo isin hin daangeessin sabni akka baratu baratees qaroominatti cehu cimnee itti hoojjennu nuuf yaa tahu,
Yeroo keessan guutuu dhaloota qaruuf oolfachuun, barattoota keenya giddutti miirri waliin dorgomaa wal barsiisuu akka cimu yeroo dabalataas hoojjechaa dhaloota heegaree yaa ijaarruu, Qulqullina barnootaa yaa mirkaneessinuu,
Hawaasni keenya marti Dhaqqabamummaa barnootaa mirkaneessuuf gandoota naannoo keenyaa hundatti manneen barnootaa ijaaramanii lammiin carraa barnootaa akka argatu hojii bakka bu’ummaa hin qabne hoojjechaa turtanii jirtu,
Sagantaa Tajaajila Lammummaan hojiin daree dabalataa ijaaruu, manneen barnootaa suphuu fi haaraa ijaaruu hoojjatame Duudhaan Oromummaa keenya ganamaa kan wal gargaarsaa, walii yaaduu, rakkoo harka ofiin furachuu qabatamaan mullatee jira kan dabreef galata, kan heegareef ammo amaanaadha,
Kaayyoon Oromoota maraa Dhaloota aadaa fi duudhaa isaa baree beekkomsaan ga’oome ijaaruu fi Oromiyaa Waa hundaan Misoomtee fi badhaate ijaaruudha, Dhaloota ofitti amanu ijaaruudha.
Kanaaf Duudhaa Oromummaa ganamaa Mariif marabbaan rakkoo furuu, Halkaniif guyyaa hoojjechuun dhaloota waa hundaan dorgomaa fi injifataa tahe uumuuf walii yaa tumsinu tokkummaa keenya yaa cimsinu.
Hojii daree dabalataa ijaaruu, manneen barnootaa baballisuu mootummaan itti cichee hoojjechaa jiru cinaa dhaabbannee humna, beekkomsaa fi qabeenya qabnuun rakkoo dhalootaa yaa furruu.
Hawaasni Barnootaa marti barnootaan saba ceesisa, beekkomsi dhaloota injifataa bu’aa caalutti tarkaanfachiisa, hojiin hardha hoojjennu boru milkeessa.
Oromiyaa ni ijaarra, Biyya ni utubna, Gaanfa Afrikaa ni boqachiifna!!!
Obbo Shimallis Abdiisaa I.A.P.Mootummaa Naannoo Oromiyaa
Finfinneetti Wiirtuun To’annaa Tiraafikaa ijaarramuufi
Guyyaan alaabaa 12ffaan Wiixata dhuftu, Onkololeessa 3,2012 kabajamee oola
Yaa’ii siiviil aaviyeeshinii idil addunyaa 40ffaarratti sanadni Ityoophiyaan…
Ammeentaan qoodinsa baajata deeggarsa naannoolee waggaa lamaaf dheerate
Keeniyaatti miidhaa qaqqabsiifameen lubbuun humnoota…
MM Dr Abiy Ahimad, Sudaan Kibbaa galan
Jaappaan lubbuu baraartota kuma dhibba 1 fi kuma 10 ol…
Raayyaan ittisaa Jibuutii daangaa cee’uun miidhaa hin…